के खाली ग्यास सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ त ? – Enepali Samchar
May 11, 2021 adminLeaveaComment on के खाली ग्यास सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ त ?
e nepalisamchaar // काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलिएको छ । संक्रमित बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पतालहरूमा उपचाररत बिरामीलाई अक्सिजन सपोर्ट अनिवार्य जस्तै भएको छ ।